पेटमा छोरा छ कि छोरी? थाहा पाउनुहोस यसरी – Jagaran Nepal
पेटमा छोरा छ कि छोरी? थाहा पाउनुहोस यसरी
काठमाडौंः महिला गर्भवती भएको समयमा घरपरिवारले सुनौलो सपना देख्न थाल्छन् । बच्चा छोरा हुन्छ वा छोरी भन्ने बारेमा कुराकानी हुन्छ । परिवारले देख्ने सपना, हुनेवाला आमाले देख्ने सपनामा घरमा आउने नयाँ पाहुना छोरा होला कि छोरी भनेर बहस नै चल्छ ।
हुन त अहिले विज्ञानका कारण पेटमा छोरा छ कि छोरी भनेर थाहा पाउन सकिन्छ । तर, कतिपय देश जस्तै भारतमा यो कुरालाई अपरोधको रुपमा पनि हेरिन्छ । तर, विज्ञान जस्तै बिना कुनै मेसिन वा विना कुनै प्रविधिको प्रयोग पनि पेटमा छोरा छ कि छोरी भन्ने कुराको सम्भावना यकिन गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा नमिले पनि प्राय यी प्रक्षेपणहरु ठिक भएका छन् ।
बच्चा पेटमा हुँदा आमाको शरिरमा देखिएका परिवर्तनका आधारमा पेटमा छोरा छ वा छोरी भन्ने सोच्न सकिन्छ । हुन त यो विधि १०० मा १०० प्रतिशत मिल्छ भन्ने होइन् । तर, प्रायः यस विधिबाट गरिएका पूर्वानुमानहरु फेल खाँदैनन् ।
गर्भवती महिलाको पेट भारी छ र तलतिर झुकेको छ भने पेटमा छोरा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसतै गर्भावस्थाको समयमा छालामा हुने परिवर्तमा यदि महिलाको शरिर र अनुहारमा दाना र दागहरु बढि देखिए भने छोरा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, पेटमा छोरा हुँदा महिलाको अनुहार केही सुकेको पनि देखिन्छ।
त्यस्तै, पेटमा छोरा हुँदा महिलाको शरिरमा पनि परिवर्तन आउँछ । यस्तो समयमा यदि महिलाको स्तन दाँया पट्टिको ठूलो छ भने छोरा भएको अनुमान गरिन्छ । गर्भावस्थामा महिलाको खुट्टा चिसो हुने, सुख्खा हुने र हातहरु खस्रो हुनाले पनि महिलाको पेटमा छोरा रहेको देखाउँछ ।
त्यस्तै, पेटमा छोरी भएको अवस्थामा पेटमा भएको बच्चाको धडकन छिटो धडकिएको छ भने त्यसले छोरी भएको बुझाउँछ । एक मिनेटमा पेटमा भएको बच्चाको धडकन १ सय ४० पटकभन्दा बढि धडकिएको छ भने पेटमा छोरी भएको अर्थ लाग्छ । त्यस्तै, पेटमा बच्चा हुँदा हुने वाकवाकी अत्याधिक लागिरहेको छ भने पेटमा छोरी छिन भन्ने अनुमान लगाउँन सकिन्छ । सँगै महिलाको पेट गोलाकार वा केही माथी उठेको किसिमको छ भने पेटमा छोरी भएको अर्थ लाग्छ ।